Izindlu e- Lastovicka - I-Airbnb
Izindlu e- Lastovicka
Stará Lesná, Prešovský kraj, i-Slovakia
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Sep 28.
Ifulethi elithokomele elisenkabeni ye-Stara Lesna linezici ezikhethekile ezizokwenza izivakashi zethu zizizwe zisekhaya. Senze ukuthi sicabange ngemindeni enezingane kodwa nezivakashi zabantu abadala. Imibhede yabantu ababili ethokomele, ikhishi elihlome ngokuphelele, osofa nendawo yokuhlala nje ufunde noma udlale ngamathoyizi. Wonke umuntu uzothola okuthile kubo kungakhulumi ngobuhle nomoya onempilo we-High Tatras.
Ifulethi elisha lokuphekela elisesigodini esincane esithandekayo eduze kwesitolo segrosa. Ukubuka kwentaba, indawo yokupaka evikelekile yezimoto ezi-2, ukuma okulula, indawo eyanele yomndeni owodwa onezingane noma iqembu labantu abadala (abantu abangafika kwabangu-4). Ababungazi bakhuluma kahle isiSlovak, isiPolish nesiNgisi. I-High Tatra inikeza abantu abathanda ezemidlalo ukukhethwa okukhulu kwemisebenzi. Inketho engcono kakhulu iholidi lesonto noma amasonto amabili futhi uzohlola ibhuloho lezindawo nokuhehayo. Sicela, uzizwe wamukelekile ukuvakashela.
ubusuku obungu-7 e- Stará Lesná
Sahlela ifulethi lethu ikakhulukazi imindeni enezingane ezincane / izingane ezincane. Idolobhana lase-Stara Lesna ngokwalo lidume kakhulu ngezimfuno zesi-Slovak, zibuya unyaka nonyaka. Kuhle ukuhambahamba, imidlalo yebhola endaweni efanele yebhola, kanye nenkundla yokudlala yezingane ezincane. Ithrafikhi ayimatasatasa kakhulu ukuze uthole izinkathazo. Umfudlana omncane othandekayo onamanzi acwebile, amaxoxo, izinhlanzi, izinyoni ezincane, .. kodwa nezilwane zasendle ezisehlathini. Uma ukhathele izindawo ezimatasa zezivakashi zezentengiselwano lena yindawo Yakho. Uzothola ukuthula nobumfihlo lapha, indawo ezungezile emangalisayo, ukuzulazula ehlathini noma emasimini akunqatshelwe. Ukuhamba okungapheli kulungile ukusula ingqondo Yakho. Zama futhi uzobuya unyaka nonyaka.
Hlola ezinye izinketho ezise- Stará Lesná namaphethelo